'ILabyrinth' ibuyela kumatiyetha nge-35th Anniversary yayo!
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'ILabyrinth' ibuyela Ematiyetha nge-35th Anniversary yayo!
'ILabyrinth' ibuyela Ematiyetha nge-35th Anniversary yayo!
by Waylon Jordan August 5, 2021
by Waylon Jordan August 5, 2021 36,036 ukubukwa
Ifilimu likaJim Henson eliyingqophamlando Labyrinth izobuyela kumatiyetha lokhu kuwa kugujwa iminyaka engu-35 kwasungulwa i-Fathom Events.
Kudlala uJennifer Connelly noDavid Bowie, le filimu ilandisa ngentombazane enenkani eyeqisayo egama linguSarah efisela ngengane yakhe umfowabo ngengalo kaJareth, iGoblin King onqaba yakhe isenhliziyweni ye-labyrinth esontekile. Njengoba eqala ukutakula ingane, ufunda izifundo ngobungani, ukwethenjwa, nangamandla akhe uqobo nasendleleni.
Inganekwane emnyama kalula ingenye yamafilimu amangalisa kakhulu ohlobo lwayo kusuka ngawo-1980, mhlawumbe aphikiswa kuphela nguHenson's I-Crystal Emnyama.
UConnelly noBowie njengoSarah noJareth, inkosi yaseGoblin.
“Esinye sezihloko esihlale sizicela kakhulu, Labyrinth ithokozela abalandeli abaningi futhi abazinikele, ”kusho uTom Lucas, iPhini Likamongameli weFathom Events Events yeStudio Relations. "Siyajabula ukuletha lo mlandeli othandwa kakhulu ngabakwa-Jim Henson Company kumabhayisikobho ezweni lonke, ikakhulukazi lapho kugujwa iminyaka engama-35."
Labyrinth yayiqondiswa nguJim Henson ngombhalo kaTerry Jones ka Monty Python udumo. UBrian Froud wakhonza njengomklami womqondo kulo msebenzi noGeorge Lucas njengomkhiqizi omkhulu. UTrevor Jones uqambe amaphuzu kwathi uBowie wanikeza izingoma ifilimu kufaka phakathi i- "Magic Dance" ecashunwe kaningi.
Amathikithi we Labyrinth izoqala ukuthengiswa kusasa, ngoLwesihlanu, Agasti 6, 2021, ngomhlaka iwebhusayithi esemthethweni yeFathom Events. Ifilimu izokhonjiswa Septhemba 12, 13, no-15, 2021.